Home » Creative Writing » ရည်းစားစာ
Posted by Shar Thet Man on Oct 22, 2016 in Creative Writing, Short Story | 12 comments
ကျွန်တော်ကသင်္ဘောသားဆိုတော့.. သင်္ဘောစလိုက်ကတည်းကတစ်ခါမှရန်ကုန်မှာသင်္ကြန်ဆိုတာကြီးနဲ့ လုံးလုံးဆုံကိုမဆုံဖြစ်တော့ပါ။ သင်္ကြန်ရောက်ရင်.. အမြဲသင်္ဘောပေါ်ကြီးမှာပဲဆိုတော့.. ဒီနှစ်သင်္ကြန်တော့ရန်ကုန်မှာရှိတုန်းရှိခိုက်အမုန်းကဲမယ်ဆိုပြီးမဏ္ဍပ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုမှာဒီနေ့ ပဲသူငယ်ချင်းဘော်ဒါတွေနဲ့ All day ticket၀ယ်ပစ်ပလိုက်တယ်။
သင်္ကြန်ရက်ကိုကျရောက်လို့လာပါပြီ။ မဏ္ဍပ်ပေါ်မတက်သေးဘဲ.. ပြည်လမ်းရဲ့ မဏ္ဍပ်ရှေ့ မာလာဆောင်ရှေ့ မှာပဲဘော်ဒါတွေ
အတူစုပြီးစားသောက်နေလိုက်ကြသေးသည်။ မာလာဆောင်ရှေ့ မှာစားသောက်ဆိုင်တန်းတွေကအလျှံအပယ်။
ကိုယ့်အုပ်စုနဲ့ ကိုယ်ထိုင်ကြစားကြသောက်ကြစကားပြောကြနှင့်။ မဏ္ဍပ်ကလည်း၉နာရီထိရေမဖွင့်သေးဘဲ.. သီချင်းတွေအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတာဆိုတော့.. စားလို့သောက်လို့ကလည်းကောင်းနေရောပေါ့.အမျိုးအစားအစုံအလင်နဲ့ လှပနေကြတဲ့ကောင်မလေးတွေဆိုတာလည်းပေါရောပေါ့.. ခုမှပဲတစ်နေရာထဲမှာအပြည့်အ၀ဖီလင်ကလည်းကောင်းနေရော။ တစ်နေကုန်ကိုမဏ္ဍပ်ပေါ်မတက်ဘဲအောက်မှာသယ်ရင်းဘော်ဒါတွေနဲ့ စကားပြော၊ အရက်ထိုင်သောက်၊ ဖြတ်သွားဖြတ်လာစကီလေးတွေကိုလည်းရှိုးနေရတာ.. .. တယ်ကောင်းတဲ့ဖီးလ်ပဲ။
သင်္ကြန်ဒုတိယနေ့ ကိုရောက်လို့ လာပါပြီ။ ဒီနေ့ လည်းဘော်ဘော်တို့ ကမတက်သေးဘဲအောက်မှာပဲစားလို့သောက်လို့ကောင်းနေပြန်ရော။ ဒီနေ့ တော့.. ၁၁နာရီမှမဏ္ဍပ်တက်ကြမယ်ဆိုပြီးမဏ္ဍပ်ပေါ်တက်.. လူတွေကလည်းပြည့်ကျပ်ညပ်။ DJကလည်းကောင်းတစ်ချက်မကောင်းတစ်ချက်နဲ့ ကရတဲ့ဖီးလ်ကမကောင်းလာတော့အကုန်သူအောက်ကိုပဲပြန်ဆင်းကြတော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ နေ့ လည်စာစားနေကြတဲ့အချိန်မှာ ကောင်မလေး၂ယောက်နဲ့ ကောင်လေး၁ယောက်ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းထဲကို
ရောက်လာကြတယ်။ ကျွန်တော့်ဘော်ဒါတစ်ယောက်နဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းလို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့ကောင်မလေးကတော့တခြားစကီလေးတွေလိုလိုင်နာတွေ၊ နှုတ်ခမ်းနီတွေအရောင်ထွက်အောင်မဆိုးထားဘဲ.. .ခပ်ပါးပါးလေးနဲ့ 
မျက်နှာလေးကကြည်လင်နေသည်။ ဖန်စီမျက်မှန်လေးကလည်းအကြည်လေးတပ်ထားပြီးနဲ့ မဏ္ဍပ်ကပေးတဲ့နေ့ လည်စာကိုစားနေလေရဲ့ ။ အဲဒါနဲ့ ဘော်ဘော်ကမိတ်ဆက်ပေးတော့.. သူ့ နာမည်လေးက.. .. .. .. .. “.. .. .. .. .. .. .. .”။ ၂လုံးတည်းဗျ.. ခင်တဲ့သူတွေကအဲလိုခေါ်တာတဲ့။ သူ့ ဖာသာသူထမင်းအေးအေးဆေးဆေးစားနေတုန်းကျွန်တော်က “ဘယ်နားမှာနေတာလဲ” လို့ မေးလိုက်တော့ရန်ကင်းမှာတဲ့.ကျွန်တော့်ဘော်ဒါတို့အိမ်နားမှာနေတာတဲ့(နောက်တော့.. ရန်ကင်းကိုချောင်းပေါက်တော့
မဏ္ဍပ်ပေါ်ကိုညနေဘက်ပြန်တက်ကြတော့.. ကျွန်တော်မကနိုင်တော့ပါ။ သောက်ထားတာကြောင့်မဟုတ်ဘဲ.. အဲ့ကောင်မ
လေးကိုသာငေးနေမိခဲ့တယ်။ ကောင်မလေးက.. မကတတ်တာပဲလား.. .မကတာပဲလားမသိ။ သိပ်မက.. လှုပ်ရုံသာ။ တခြား
ပြီးအပေါ်ကလည်းလက်ပြတ်ကုတ်အစိမ်းကလေးနဲ့ ။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့တမူထူးခြားတဲ့မိန်းကလေးပါပင်။ ဟော.
.သေချာကြည့်မိတော့.. ပါးမို့ မို့ လေးထက်က.. စံပယ်တင်မှဲ့ လေးနဲ့ ။ (အမေပြောတဲ့အမောပြေဆိုတာ.သူ့ မျက်နှာလေးထင်ရဲ့ )
ဒီနေ့ လည်းသူမ.. .လာမလားလို့ ကျွန်တော်မဏ္ဍပ်မတက်ခင်စောင့်မျှော်နေသေးတယ်.. သူမဒီနေ့ ရောက်မလာပါ။ .. .ဘော်ဒါ
မေးကြည့်တော့.. သူမဒီနေ့ မလာဘူးဟုသာပြောသည်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲဟာတာတာနဲ့ .. နေလို့ထိုင်လို့မကောင်း။ သောက်
တာတောင်.. စိတ်မပါ.. ကျွန်တော့်ဘော်ဒါတို့ ကသတိထားမိလေတော့.. .၀ိုင်းစနေကြသည်။ ဒီနေ့ ကတော့စိတ်မပါတပါနှင့်
ဒီနေ့ ကောသူမ.. လာပါ့မလား??.. .အိမ်ကထွက်လာကတည်းကစိတ်တွေလေး.. ပူပန်နေမိတယ်.. .မဏ္ဍပ်ရှေ့ လည်း
ရောက်ရော.. အနီရောင်ရှပ်အကျီအရှည်လေးနဲ့ သူမကိုလှမ်းတွေ့ လိုက်ရတော့.. အတော်ပျော်သွားသည်။ မျက်နှာပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ လျှောက်လာတော့သူငယ်ချင်းတွေက.. ဘာဖြစ်လာတာလဲ.. ငိုလာတာလားဆိုပြီးဝိုင်းစကြသည်။ ထုးံစံအတိုင်းမဏ္ဍပ်ရှေ့ မှာသောက်ကြစားကြပြီးတော့မဏ္ဍပ်ပေါ်တက်က.. .ကတယ်ဆိုပေမဲ့ညပ်နေတာများပါတယ်.. .လှုပ်လို့တောင်မရပါ။ ကိုယ်
mood ၀င်တဲ့သီချင်းဆိုလှုပ်လိုက်.. .. .moodမ၀င်တော့ရင်ရပ်လိုက်.. ပြီးတော့foamတွေလည်းဆော့လို့ရအောင်ထားပေး
ကြတော့.. နှင်းတောထဲရောက်သွားသလို.. ပစ်ကြ.. ပေါက်ကြ.. .မျက်နှာတွေသုတ်ကြနဲ့ .. .တအားပျော်ဖို့ကောင်းနေတာပေ့ါ။ .. ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးကလည်းအနားမှာရှိတော့လေ။
နေ့ ခင်းဘက်နေ့ လည်စာစားပြီးအနားယူနေကြချိန်ကျွန်တော်အိမ်သာကပြန်အလာ.. ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ ထဲကကောင်
လေးတစ်ယောက်ကသူမအနားမှာထိုင်ကာစကားပြောပြီးရယ်နေကြသည်။ ပြီးတော့.. ဓါတ်ပုံရိုက်တော့လည်း.. သူမအနားကို
အတင်းကပ်ပြီးရိုက်နေတာမြင်တော့.. လျှောက်လှမ်းလာတဲ့ခြေတွေဆိုတာအကုန်နှေးကုန်ရော။ သူမတို့ ရှိရာကိုလှမ်းလာဖို့ 
အားမရှိတော့ဘဲ.. အဝေးတစ်နေရာ.. ကွမ်းယာဆိုင်နားမှာသာမျှော်ကြည့်ပြီးထိုင်နေလိုက်သည်။ (ကျွန်တော့်သယ်ရင်းတွေ
မဏ္ဍပ် ပိတ်တော့ကောင်မလေးရယ်.. ကျွန်တော်ရယ်.. ကျွန်တော့်ဘော်ဒါအတွဲ(သူမသူငယ်ချင်းရယ်).. နောက်သူမ
နဲ့ ပါလာတဲ့သူငယ်ချင်းစုံတွဲရယ်။ အပြန်လမ်းမှာကောင်မလေးကမနက်ဖြန်မလာတော့ဘူးဟုသူတို့ အချင်းချင်းပြောနေကြသည်။ နက်ဖြန်ဆိုသင်္ကြန်နောက်ဆုံးရက်လေ.. နောက်ဆုံးရက်လေးမှာလည်းသူမနဲ့ အတူတူတော့ရှိချင်သေးတာပေ့ါ။
facebookအကောင့်လည်းတောင်းထားဦးမှပဲဆိုပြီး လှမ်းမေးလိုက်တော့.(.. .. .. .. .. .. .)ဟုကျွန်တော့်ကိုပြောသည်။ ကျွန်တော်လည်းဖုန်းမှာကောက်ရှာလိုက်သည်။ .. .ညဘက်စကားပြောမယ်နော်.. အားလားဆိုတော့.. .သုံးတတ်ပါတယ်တဲ့.. အွန်လိုင်းရှော့ လုပ်တာများတယ်တဲ့။
ညဘက်ကျတော့.. .ကျွန်တော်.. သူမထမင်းစားပြီးချိန်လောက်ကိုမှန်းပြီး.. ဖေ့ဘွတ်မှာ.ဟိုင်းခေါ်လိုက်တယ်.. .. .ကောင်မ
လေးမရှိသေးပါ.. .တစ်နာရီကြာလည်းပေါ်မလာ.. နှစ်နာရီကြာလည်းပေါ်မလာနဲ့ .. ကျွန်တော်ဘော်ဒါ(သူမသယ်ရင်း)ဆီဖုန်း
ဆက်လိုက်တော့.. ဒီကောင်ကလည်း.. သူမဖုန်းနံပါတ်လိုချင်လို့ လားဟု.. တန်းမေးသည်။ .ကျွန်တော်လည်းရှက်ကိုးရှက်
ကန်းဖြင့်.. အေး.. ဟုတ်တယ်.. လို့ပြောပြီး.. ကောင်မလေးဆီကိုကောက်ဆက်လိုက်သည်။ ကောင်မလေးကလည်းကျွန်တော့်
ကိုစာပြန်ရေးကြောင်း၊ ကျွန်တော်ကသာပြန်စကားမပြောကြောင်းဖြင့်ငြင်းရာမှ.. အကောင့်နာမည်ကိုပြန်စစ်ရာ.. .ကျွန်တော့်
မှာအကောင့်၂ခုရှိသောကြောင့်.ကောင်မလေးကကျွန်တော်ဟိုင်းလုပ်သောအကောင့်ကိုစာပို့ တာမဟုတ်ဘဲ.. ကျွန်တော်
ဟိုင်းမလုပ်သော.. အကောင့်ကိုစာပို့ ခြင်းသာဖြစ်သည်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ စကားတွေဆက်ပြောကြသည်။ ကျွန်တော်က
နက်ဖြန်လာမှာလားလို့မေးတော့.. သူမကမလာတော့ကြောင်း.. 2ရက်ကဲပြီးပြီးဖြစ်ကြောင်း.. ချောင်းတွေလည်းဆိုးနေကြောင်း.. .သူမမလာတော့ရင်.. တစ်ယောက်ယောက်တော့လွမ်းနေတော့မှာပဲဟုဆိုတော့ကျွန်တော်အံ့တောင်သြသွားသည်။ .. ကျွန်တော့်စိတ်ကိုများကြိုသိနေသလားဟုထင်ရသည့်အတိုင်း.. .ကျွန်တော်က “ဘယ်လိုသိလဲ”လို့ပြန်မေးတော့.. စလိုက်
တာတဲ့.. တကယ်ကြီးဖြစ်နေတာလားဆိုပြီးကျွန်တော့်ကိုပြန်မေးသည်။ ကျွန်တော်လည်းသူများလက်ထဲတော့အပါမခံနိုင်၊ ဒီနေ့ နေ့ လည်ကအဖွဲ့ ထဲကကောင်လေးနဲ့ အဆင်ပြေနေလိုက်ကြတာများ.. .ရင်ထဲမကောင်း။ ကျွန်တော်ချစ်တာလည်းသေချာနေပြီဖြစ်သောကြောင့်.. ဖုန်းထဲမှာပဲ.တစ်ခါတည်းရည်းစားစကားပြောလိုက်ပါတော့သည်။ ကောင်မလေးမှာအံ့သြမှုတွေဖြစ်ပြီးဟုတ်ရဲ့ လား.. .မဖြစ်နုိူင်ပါဘူး.. ထင်တောင်မထင်ဘူးဟုပြောတော့.. အကုန်သူသိတယ်.. သူမပဲမသိတာဟုပြောလိုက်သည်။ မနက်ဖြန်ကိုလာခဲ့ပါဟုပြောတော့သူမလက်မှတ်ကိုလိုချင်တဲ့သူရှိလို့ပြန်ရောင်းလိုက်ပြီဟုပြောပြီးဖုန်းချသွားသည်။
မလာတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်မသက်သာရာရနေရာကနေတခြားသူငယ်ချင်းတွေကလည်းလာဖို့ ခေါ်လို့ဒီနေ့ လာခဲ့မည်ဟုပြောလိုက်တော့.. .ရင်ဘတ်ကြီးကတဒုန်းဒုန်းနဲ့ ရင်တွေခုန်ပြီးပျော်နေတာ.. ပြောမဆုံးပေါင်တောသုံး
ထောင်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ရေမိုးချိုးပြီးတာနဲ့ မဏ္ဍပ်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။ ဟိုရောက်တော့ကောင်မလေးက.. တကယ်ပဲချောင်းတွေ
သူမသောက်လာခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သူမချောင်းဆိုနေမှန်းသိလေတော့.. ကျွန်တော်မနည်းဆေးဆိုင်ကိုရှာလိုက်ရသည်။
သင်္ကြန်ဆိုဆိုင်တွေအကုန်နီးပါးပိတ်ကြသည်။ ပြီးတော့သူမအနားမှာကပ်လျက်ထိုင်လိုက်သည်။ ရင်ခုန်သံတွေကတော့ဒိန်း
၀ိုင်းခေါ်ကြတော့သူမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ သူမကလည်းသွားပါ.. ဒီမှာပဲထိုင်နေမှာပါ.. ခဏနေမှ.အကိုနဲ့ တွေ့ စရာရှိ
တာဟုပြောတော့.. ကျွန်တော်လည်းစိတ်မသက်သာရာဖြင့်မထားချင်ပေမဲ့ထားခဲ့လိုက်ရသည်။့ မဏ္ဍပ်ပေါ်ရောက်တော့ဘာ
အသံကိုမှနားထဲမကြားနိုင်။ စိတ်တွေကကောင်မလေးဆီမှာသာကျန်နေခဲ့သည်။ မဏ္ဍပ်ပေါ်မှာလည်းကောင်မလေးကိုသာ
ငေးကြည့်နေမိသည်။ ခဏနေတော့ကောင်မလေးကထိုင်သည့်နေရာမှာမရှိတော့ဘဲ.. ဘယ်ထထွက်သွားမှန်းမသိတော့။
ကျွန်တော့်ရင်ထဲစူးခနဲနာကျင်သွားသည်။ ကျွန်တော်တို့့မဏ္ဍပ်အောက်ဆင်းလာပြီးခဏသောက်နေကြသော်လည်းကောင်မလေးကပြန်မရောက်လာခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်အအေးသွားဝယ်ဦးမယ်ဆိုပြီးသွားဝယ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီးသူမများပြန်လာတော့မလားဆိုပြီးဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားကြည့်မိသည်။ အရိပ်တောင်မတွေ့ ရသောကြောင့်မဏ္ဍပ်ရှေ့ သို့ ပြန်လာပြီးသယ်ရင်းတွေကပြန်တက်ကြမယ်ဟုဆိုပြီးကျွန်တော့်ကိုဆွဲခေါ်သွားသည်။ စိတ်ကောလက်ကောခြေတွေပါလေးလံနေတော့သည်။ မဏ္ဍပ်
ပေါ်ရောက်တော့သူမများပြန်လာမလားဟုမျှော်ကြည့်လိုက်ရာ.. သူမပြန်လာထိုင်နေသည်ကိုလှမ်းတွေ့့သွားတော့ကျွန်တော်အပျော်ကြီးပျော်သွားသည်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲကအလုံးကြီးအဲ့အချိန်မှသာကျသွားတော့သည်။ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ အလင်းရောင်.မီးအိမ်ရှင်လေးပါ.. ။ ကျွန်တော်လည်းမဏ္ဍပ်မှာခဏလောက်နေပြီးအောက်ကိုအမြန်ဆင်းလာလိုက်သည်။ ရုတ်တရက်
သူမဘေးခပ်လှမ်းလှမ်းမှာအကိုကြီးတစ်ယောက်ကိုလှမ်းတွေ့ လိုက်တော့.. ခဏတန့် သွားသည်။ သူမက.. သူလည်းမသိဘူးဟုဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူမဘေးနားမှာခုံကလည်းလွတ်နေတော့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ဘယ်သွားနေလဲ.. ဆို
တော့.. ဒီနားဟိုနားဆိုပြီးပြောသည်။ သူမနှင့်နီးနီးကပ်ကပ်လေးရှိနေခွင့်ရတာကျွန်တော်အလွန်ကံကောင်းလွန်းလှသည်ဟုခံစားမိပါသည်။ ခဏကြာတော့ကျွန်တော့်ဆီဘော်ဒါတွေကဖုန်းလှမ်းဆက်ကြသည်။ ကျွန်တော်လည်းခဏထထွက်သွားပြီးပြန်လာတော့သူမအတွက်ပါမဏ္ဍပ်ပေါ်တက်လို့ရအောင်ကဒ်ပြားဆွဲခဲ့လိုက်သည်။ သူမက၅နာရီလောက်မှတက်ချင်သည်ဟုဆိုကာသူမနှင့် စကားစမြည်ပြောပြီးမဏ္ဍပ်ပေါ်တက်ခဲ့ကြသည်။ မဏ္ဍပ်ကလူများတော့သူမကိုကောင်လေးတစ်ယောက်က
လာတွန်းသလိုဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကကောင်မလေးလက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်သွားလိုက်သည်။ ပြီးတော့foam တွေနဲ့ ကစားကြ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြနဲ့ တခြားသူတွေတော့မသိ.. ကျွန်တော်ကတော့အတိုင်းမသိပျော်နေတာ။
အပြန်ကျတော့ကျွန်တော်သူမအိမ်နားထိလိုက်သွားပြီးလိုက်ပို့ သည်။ ကောင်မလေးကအနောက်ကိုတစ်ချက်မှလှည့်မကြည့်
ဒီနေ့ ကတော့သူမနှင့်ပထမဦးဆုံးဒိတ်လုပ်တဲ့နေ့ ပါ။ ကန်တော်ကြီးထဲမှာသူမ.. သူငယ်ချင်းနဲ့ တွေ့ နေရာကနေခေါ်လာ
ပြီးဗိုလ်တစ်ထောင်ကမ်းနားမှာသွားထိုင်ကြသည်။ ပြီးတော့”ချစ်တယ်”လို့ပြောလိုက်တော့မှ ရင်ထဲကမတရားပြောချင်နေ
သူမနဲ့ ကျွန်တော်တွေ့ တာ၃လမြောက်တဲ့နေ့ .. ပြီးတော့သူမမွေးရက်(ကျွန်တော်နဲ့ မွေးရက်အတူတူပဲမို့ အမှတ်တရအဖြစ်
ပေးချင်သည်ဟုပြောသည်။ )မှာကျွန်တော့်ကိုအဖြေပြန်ပေးတော့.. သူမဖုန်းကိုကြည့်ခိုင်းသည်။ Instagramမှာပိုစ့်လေးတစ်ခုတင်ပြီးကျွန်တော့်ဘ၀အတွက်အရေးကြီးဆုံးသော၊ အလိုချင်ဆုံးအဖြေကိုပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်လည်းပျော်လွန်းအားကြီးသောကြောင့်.. .. .. .
“ဘုရား(အာမေဍိတ်သံ).. .. .. .. .. .. .. .. .ဟွန်း.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. သွား.. .. .. .. .. .. .. .”(သူမရဲ့ အပြုံးကလေးကတောက်ပစွာ)
သူမလက်ကလေးကိုဘယ်တော့မှဖြုတ်မည်စိတ်မကူးဘဲ.. သူမလည်းထိုသို့ သာဖြစ်မည်ဟုဆန္ဒပြုရင်း။
PS : အမှတ်တရအဖြစ်။
မွန်မမ စာရေးတာ.. စပေ့တွေထည့်ရိုက်ရင်ကောင်းမယ်..။
တော်ကြာ ရည်းစားစာရေးတာ.. အစွန်းထိလိုက်မဖတ်နိုင်လို့.. အလုပ်မဖြစ်ပဲနေမှာနော..။
ဟုတ်တယ် Thint Aye Yeik ..အကိုကအလင်းဆက်လား….ရုပ်တူတယ်နော်
အလင်းဆက်ဆိုတာ ဘယ်သူတုန်း ဘယ်ကတုန်း
စကားပြောသလို ဖတ်သွား၊ စကားပြောရင်.. ရပ်ရမယ့်နေရာ (အသက်ရှုဖြစ်ဖြစ်ခဏနားတဲ့နေရာ) မှာ စပေ့စ်ရိုက်ထည့်..။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခုစလုပ်နေပါပြီ ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ပါတယ်
အမှန်က ချစ်တယ်မချစ်ဘူးဆွာ ချက်ချင်းသိတဲ့ အမျိုး
၃လက ကြာတယ် သလားး